iDVD AVI - Sida loo Beddelaan AVI in iDVD ama DVD on Mac
iDVD waa software DVD gubashada weyn u Mac. Ma suurogalbaa in dajiyaan AVI in iDVD iyo gubi in DVD disc ah? Waxay ku xidhan tahay waxa codecs waxaa loo isticmaalaa in video AVI ee files. Laakiin tan iyo markii aad halkan u joognaa, waxaan beensheegayaal ahayna ma aad AVI video waxaa encoded la codec ah oo aan oo ay taageerayaan iDVD iyo QuickTime ciyaaryahanka. Hoos waxaa ku qoran labada xal ay gubaan AVI in DVD.
iDVD AVI Xalka # 1: DVD Creator ka fiican yahay iDVD
Tan iyo iDVD ma kuu ogolaanayaa inaad si ay u gubaan AVI in DVD, kaliya waxaa iska dhaafay oo heli kale iDVD ah u Mac. Halkan ayaan u Khushuucdo Dartiis talinaynaa DVD Creator ka Wondershare u Mac (libaax buurta, libaax taageeray). Waxay leedahay taageero qaab video ballaaran. Marka waxaan idinku leeyahay ballaaran, waxaan ula jeedaa dhammaan qaabab video caan ah sida hoos ku qoran. Videos sokow, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa filim la sawiro iyo music si wada gubi videos ah. Muuqaalada Video tafatirka ay sidoo kale ka mid ahaa, sida falinjeeerka, lana siii, qoqobada, iwm
Video qaabab ay taageerayaan : MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, 3G2, MOV, F4V, M4V, Mpg, MPEG, TS, TRP, M2TS, MTS, TP, DAT, wmv, MKV, ASF, DV, mod, NSV, TOD, iyo EVO.
Image qaabab ay taageerayaan : JPG, jpeg, PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF, EMF iyo WMF.
Iyadoo DVD Creator for Mac, waxaad si fudud u bedeli karaan AVI in DVD iyo gubi in DVD disc la qalab dhisay-in. Kaliya qasabno yar waxaa looga baahan yahay. Haddii loo baahdo, ka eeg hagaha faahfaahsan: AVI gubi in DVD .
iDVD AVI Xalka # 2: Beddelaan AVI in iDVD qaabab socon
Xal kale AVI iyo iDVD waa in loogu badalo AVI la codec iDVD-aqlka in iDVD codec socon. Waxa aad u baahan tahay oo kaliya Converter video sida Wondershare ah Video Converter u Mac (libaax buurta, libaax ka mid ah), taas oo keliya ma aha kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo AVI in iDVD qaab socon sida MOV, laakiin sidoo kale kaa caawin in aad loogu badalo AVI videos oo wuxuu ku raaxaysan kasta oo video ah oo ku saabsan Device Apple sida iPhone, iPad, iPod, iwm Waa wax weyn macruufka video Saaxiibka waa in aad leedahay.
Badan oo ku saabsan AVI iyo iDVD
AVI (Audio Video Interleave) qaab file waa qaab weelka ay diyaariyeen Microsoft ah. AVI u dhaqmo sida sanduuq ay ku jiraan laga yaabaa codecs audio iyo video ma ay taageerayaan iDVD. Si Imtixaamo AVI ah waxaa taageera iDVD ama ma, kaliya ay helaan faylka .AVI isticmaalay mashruucan iDVD oo u furan QuickTime Player. Sida caadiga ah, haddii video AVI ka ciyaara kaamil ciyaaryahan QuickTime, waa in lagu gubaa si DVD la iDVD si guul leh.
Sidee baan u bedeli karaan video .avi iyo subtitles .srt in DVD ah? AVI waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in uu kaydiyo DVD filimada iyo in la caadiga ah lagala soo bixi karaa online. Waxa kale oo jira Cinwaan u filimada DVD ah. Si aad u dhigay AVI iyo SRT (ama dameerkiisa, SSA) wada, isticmaasho Video Beddelaan u Mac (libaax buurta taageeray) talinayaa in xal 2. Waxaad si fudud ku dari kartaa Cinwaan in avi isticmaalaya feature tafatir ah. Ka dib markii laga keeno video ah, riix "qalinka" button in la furo tafatirka daaqadaha, oo taga si tab Cinwaan inay ku shuban file Cinwaan dibadda ka your computer.
Fadlan ilaali Tutorial Video ah:
> Resource > DVD > iDVD AVI - Sida loo Beddelaan AVI in iDVD ama DVD ee Mac